Nzvimbo yekuberekerwa demokarasi uye hupenyu hwemazuva ano hwekumadokero, hakuna chimwe chiitiko chakadai seGreece. Kubva kuOracle yeDelphi kusvika kuCenhenon neAcropolis, kuenda kuGreece nde fanira pane chero ibhuku-rondedzero kune muongorori anofungidzira kuti ndiani isu uye kubva kupi kwatakasvika. Ongorora nyika dzakasiyana-siyana dzinovaka Girisi, uye chengetedza zvinhu zvose kubva kuAtene kusvika Santorini, Mykonos uye zvikurukuru Krete.
Migwagwa-mizinda yeFira neOia
Greece inonyanya kuoma kufamba, ichifunga kuti ndiyo yakaunganidzirwa-yekusanganiswa kwezvitsuwa uye mabhuku ezvinyorwa zvinonyanya kufamba zvakapfuura nepakati pemakwenzi. Kunyange zvakadaro, nekutonga kwakanaka iwe unogona kuona zvakawanda munzvimbo yekuzvarwa kweDemocratic.
Zvichienderana nekureba kwerwendo rwako, uye kutora nzvimbo yepamunharaunda yekusvika pakuita nharo, hezvino izvo zvatinokurudzira zvinokosha.
3 mazuva: Athens
5 mazuva, onai: Hydra
7 mazuva, onai: Mykonos kana Santorini
10 mazuva, wedzera: Heraklion
12 mazuva, Wedzera: Olympia kana Kalamata
14 mazuva, Wedzera: Gomo reParnassos uye Delphi
Power Adapter: MuGreece, zvigaro zvemasimba ndezvipi zvechimiro C uye F. Mhepo yakakwana ndeye 230 V uye inowanzoenderana ne50 Hz.
Mhosva uye kuchengetedzwa: Chekutanga, musaiti kutyaira mumaguta makuru muGreece. Mitemo yekufambisa inonyanya kukwikwidza, uye migwagwa yakazara nekubatanidzwa kwevashanyi uye vanogara. Mabhasikoro, motokari, motokari, uye vanofamba vanoita mamiriro ezvinhu anokanganisa kune avo vasingashandisi, izvo zvinogona kunge zvisingaiti.
Atene yakaona kuti inofambidzana nehutachiona, asi Plaka inoramba iri nzvimbo yakanaka, yakajeka uye yakachengeteka, pamwe chete nenzvimbo yakanakisisa yekugara muAtene. Kune kuwedzerwa kwehutachiona huduku muAtene pamusoro pehuwandu hweEurope, kusanganisira kukwidza-kukwidza uye kuba, asi zvisati zvanyanyisa kuponeswa kupfuura maguta makuru muUnited States Ramba wakangwarira, shandisa bhanhire rechibharo, uye vazhinji vavo vanoramba vachiremekedza vanhu uye tsika.
Verenga Zvakawanda Pamusoro peGreece!
5 Inofanirwa-Shanya Nyika Dzakanakaina Mifananidzo Mabhichi
Kunyangwe iwe uri munhu anofambira Uye nemahombekombe akawanda anotyisa kunze uko munyika dzakawanda dzakasiyana, zvinogona kuve zvakaoma kupomhodza kutsvaga kwako kwemahombekombe akanaka akapoterera. Neraki, tauya neiyi blog post ku… Read More
Nzira Yokushandisa Sei 2 Mazuva Akakwana muAtene
Kana iwe uri munharaunda wenhau uye usina kumbove nemazuva 2 muAtene, Greece - iwe uri kurasikirwa. Guta rekare guta guru reGrisi rinosarura uye guta rinobudirira, rine vanhu vanofadza, vanofadza, zvokudya zvinonaka, hupenyu hweusiku hunoputika, uye zvinopfuura iwe unogona kufungidzira kuita. Kazhinji kazhinji, zvakadaro, Athene inoratidzika seinoonekwa sekukwira-kure kwechikepe kune imwe ... Read More
Nzira Yokushandisa Nemazuva Akareba Sei MuSororini
Iwe uri munzira yako yekupedza vhiki revhiki mune chimwe chitsuwa chinopisa uye chinonaka cheSororini? Pano iwe uchawana dzimwe nzvimbo dzakanakisisa dzekushanyira uye mabasa kuti uende panguva yekushanya kwako. Kunyanya kufambisa zvinhu zvose mumapera evhiki kunogona kusakwanisika, iwe unogona nguva dzose kusarudza zvisarudzo zvinokukwezva iwe. Pasinei nokuti iwe unogara kupi ku Santorini, ... Read More
Mutauro weGreek Dolmades
Greek Dolmades (kana kuti "Mazambiringa Mazambiringa" sezvavanowanzowanzonzi) ndeimwe yezvatinoda zvechiGiriki kudya. Apo inoshandiswa nerutivi rwe tzatsiki uye kuderera zvishoma kwemon, ndiyo imwe yezvokudya zvakajeka zvinoratidza humwe hwechokwadi. Chii chinonzi Dolmade, kana Dolma? Apo iwe unoti "dolma" muchiGiriki kubika, chii chaunenge uchitaura nezvazvo inoreva nguva yakareba ... Read More
Kusarudza pokugara ku Santorini, Greece ndeimwe yezvisarudzo zviri nyore zvaungaita mukufamba. Sei? Zviri nyore - hapana nzvimbo yakaipa yekugara (kana kuti, pane) Santorini. Chiwi cheGreece chinonyanyozivikanwa, chinozivikanwa neimba yebhuruu-yakagadzirwa nemadziro machena-akagezwa, ndeimwe yemakamuri akakwirira zvikuru munyika, uye ibhakiti-runyorwa rwekuenda kune vatashanyi. Ndiyo imwe ... Read More
Zvinhu Zvokuita Mu Santorini
Santorini, zvichida chivakwa chinonyanya kuzivikanwa mumatunhu anozivikanwa ne "Greek Isles", inoratidzika. Zvichienzaniswa pakuita sechinhu chipi nechipi chekutengeserana kwebhizimisi, chinyorwa mumagazini inenge imwe neimwe, uye inorota pamusoro pevaya vanofamba-famba vasati vambovapo, yakakwirira pane zvakatorwa nzvimbo dzakanzi "nzvimbo yakanaka kupfuura dzose munyika." Munzvimbo yakadai, funganya pamusoro pe "zvinhu zvokuita" munzvimbo yakadaro ... Read More
Tripmasters Review: Italy uye Greece
Tripmasters.com i-webhusaiti yatakashandisa kwemakore akawanda kuti tiende mubhuku rekuenda kuEurope chete, asiwo South America neAsia. Injini yekuchengetedza mari inopa mari yakanakisisa, iwe unogona kunge wakatoverenga kuongorora kwedu zvakanyanya pa Tripmasters mberi kwegore. Zvisinei, rwendo rwemazuva ano kuenda kuItaly neGreece ne Tripmasters rakatipa mukana wekuongororai kubhadhara kwekubhadhara mari ... Read More
7 Tropical Places Usina Kuona, Asi Unofanira!
Kana iri kuuya kune nzvimbo dzinotonhora, vazhinji mabhakiti ane zvinyorwa "zvinowanzofungidzirwa". Zvechokwadi, idzi dzakanaka nzvimbo dzakakodzera nguva yakashandiswa, asi ndezvipi zvingafanirwa kune nzvimbo zvishoma pane nzira yakarohwa? Nenguva inotevera iwe newawakaroorana naye gara pasi kuti munyore chiwi chechikepe, edza imwe yezvizvarwa zvinomwe Bonaire, Netherlands Antilles Bonaire, imwe ye ... Read More